Dawladda Ingiriiska Oo Cusboonaysay Digniinta Amni Ee Ay U Dirayso Muwaadiniinteeda Ku Sugan Somaliland | Salaan Media
Dawladda Ingiriiska Oo Cusboonaysay Digniinta Amni Ee Ay U Dirayso Muwaadiniinteeda Ku Sugan Somaliland
Xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqo sooranka Ingiriiska, ayaa muwaadiniintiisa kula taliyay inaanay u safrin Somaliland, marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera, iyagoo magaalooyinkaasna ku taliyay in loo tago oo keliya arrimaha muhiimka ah.
Digniintan ayuu Ingiriisku isku daray Somaliland iyo Soomaaliya, waxaana digniintan oo hore u taagnayd uu Ingiriisku dib u cusboonaysiin ku sameeyay 25 September, iyagoo sheegay in si dhammaystiran dib loogu eegay laakiin dib loo soo saaray iyada oo aan waxba laga bedelin, “Xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqo sooranka (FCO), wuxuu ku talinayaa inaan loo socdaalin Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland, marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera oo uu xafiiska FCO ku talinayo in loo tagi karo uun safarada muhiimka ah.” Sidaas ayuu yidhi qoraalka Ingiriisku soo saaray ee digniinta ah, waxaanu intaas raaciyay, “Muwaadin kastao o Ingiriis ah oo jooga deegaanadaas Soomaaliya ee uu xafiiska FCO ka digayo in loo socdaalo waa inuu ka baxaa. Muwaadin kasta oo Ingiriis ah oo Hargeysa iyo Berbera u jooga arrimo aan muhiim ahayn waa inuu ka baxaa.”
Ingiriisku wuxuu muwaadiniintiisa booqanaysa Hargeysa iyo Berbera kula taliyay inay ka feejignaadaan goobaha ay bulshadu kul kulanto oo ay la socdaan warbaahinta maxaliga ah iyo ta’ caalamiga ahba. “Haddii aad booqatid Hargeysa ama Berbera, waa inaad aad u feejignaataa oo ka taxadirtaa meelaha caamka ah ee ay bulshadu ku kulanto. La soco warbaahinta gudaha iyo tan caalamiga ah si aad uga fogaato wixii mudaaharaad ah ama rabshado dhacaya. Deg deg uga tag meel kasta oo aan degenayn, hana isku dayin inaad daawato ama aad sawir ka qaadato.”
Dawladda Ingiriiska ayaa lixdii sannadood ee u dambeeyay aan wax isbedel ah ku samayn khataro ammaan oo ay ku sheegto inay ka jiraan Somaliland, iyadoo sannadkii 2013 Somaliland guud ahaanteed sheegtay inay tahay dhul aan la tagi karin. Balse dawladda Ingiriiska ayaa bishii April ee sannadkii 2014 sheegtay inay xayiraadii amni ka qaaday magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera oo ay sheegtay in iyagana loo tagi karo uun arrimaha muhiimka ah, kuwaas oo ay haddana dib u soo cusboonaysiisay.